सञ्चार र दृश्यता | Martech Zone
बुधवार, अगस्त 22, 2012 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
हामी हाम्रो ग्राहकहरूसँग कुरा गर्न कार्यको बारेमा प्रत्येक दिनको बारेमा GotoMeeting प्रयोग गर्दछौं। धेरै राम्रो वास्तवमा हाम्रो ग्राहकहरु र प्रायोजकहरू मध्ये एक, Mindjet, एक GotoMeeting भिडियोमा तारांकित देखी! भिडियो पign्क्तिबद्ध गर्न बोल्छ। तपाईं एक डिजाइनिंग गर्दै हुनुहुन्छ कि दिमाग नक्शा वा परियोजना योजना समीक्षा गर्दै ... दृश्यता कुञ्जी हो। दिमाग नक्साले कल्पनाहरू, प्रक्रियाहरू र जडानहरू कल्पना गर्नुहोस् तिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो बनाउनको लागि।
Gotomeeting, अवश्य पनि, श्रब्य रूपमा कुराकानी गर्ने क्षमताको साथ उही गर्दछ, नेत्रहीन (वास्तविक वेबक्याम भिडियो सहित), र ग्रह मार्फत वा कम्पनीमा मानिसहरूलाई उही कोठामा ल्याएर अनुप्रयोगद्वारा। यो एक व्यावसायिक विज्ञापन जबकि, मेरो राम्रो मित्र र सहयोगी हो जसचा काकास-वुल्फ ल्याउँछ, आवश्यक छ।
यदि तपाईं जसचाबाट बढी सुन्न चाहानुहुन्छ - हाम्रो ईन्टरव्यू सुन्नुहोस्:
Jascha को साथ हाम्रो साक्षात्कार सुन्नुहोस्!
टैग: getomeetingजसचा काकास-वुल्फMindjetमन नक्सा
अगस्ट,, २०१ 27 2012:२१ अपराह्न
धन्यबाद, डग, जसमा हाम्रा # मिटिंग आईस् बिलीभिंग भिडियो साझा गर्नका लागि! जसचा र माइन्डजेटको विशेषता अझ धेरै आउने छ come आशा छ तपाईले राम्रो गरिरहनु भएको छ!
तपाई शर्त लगाउनुहुन्छ, @justinlevy: disqus! राम्रो उत्पादन र भिडियो धेरै राम्रो गरी सकेको छ। र यसले मलाई सम्झना गरायो कि मलाई मेरो आईप्याडमा गोटोमिटि withको साथ गडबड गर्न आवश्यक छ!